ငြိမ်းအေးစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေကြတဲ့ လူထုကြီးကို ချစ်တီးထမင်း စတုဒီသာများနဲ့ ကျွေးမွေး အလှူပြုခဲ့တဲ့ အောင်လေး – Online News Post
ငြိမ်းအေးစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေကြတဲ့ လူထုကြီးကို ချစ်တီးထမင်း စတုဒီသာများနဲ့ ကျွေးမွေး အလှူပြုခဲ့တဲ့ အောင်လေး
ခုချိန် မှာတော့ အနုပညာ လောကမှာ အောင်မြင်မှု တွေ အခိုင် အမာ နဲ့ ရပ်တည် နေကြတဲ့ အနုပညာရှင် တွေဟာ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အခြေ အနေတွေ နဲ့ပတ်သက် ပြီး ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ အားမ လျော့ ဘဲ ရပ်တည် ကာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာ ကနေ ပါဝင်လျက် ရှိနေတာကို အားလုံး မြင်တွေ့ ရမှာပါနော် … .
ဒါ့ အပြင် နိုင်ငံ အတွက် ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် မမော မပန်း နိုင်အောင် လမ်းပေါ် ထွက် ကာ လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေပြုလုပ် နေတဲ့ ပြည်သူ တွေကို အနုပညာရှင် အများ အပြားကလည်း ဝိုင်းဝန်း ကာ တတ်နိုင် သလောက် အစား အသောက်တွေ ပေးဝေ လှူဒါန်းခဲ့တာကို လည်း ကြည်နူး စရာတွေ့မြင်ရ ပါတယ် … .
အခု လည်း အောင်လေး ဟာ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အတူ ပေါင်း ပြီး ယုံကြည်ချက် တွေ အတွက် လမ်းမပေါ် ထွက်ဆန္ဒပြ နေတဲ့ပြည်သူတွေ အစားအသောက် အဆင် ပြေ စေရန် ချစ်တီးထမင်းနဲ့ အအေးများ ကို ကိုယ်တိုင် လိုက်ဝေငှပေးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ် ။ အစစ အရာရာ စည်းလုံးပြီး ချစ်စရာကောင်း လွန်းနေတဲ့ ပုံလေး တွေကို ပရိသတ် ကြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင် စေရန် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
photo : Cele Gabar
ခုခ်ိန္ မွာေတာ့ အႏုပညာ ေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြ အခိုင္ အမာ နဲ႔ ရပ္တည္ ေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ ေတြဟာ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ အေၿခ အေနေတြ နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ျပည္သူ ေတြနဲ႔အတူ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမၽွ အားမ ေလ်ာ့ ဘဲ ရပ္တည္ ကာ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ ကေန ပါဝင္လ်က္ ရွိေနတာကို အားလုံး ျမင္ေတြ႕ ရမွာပါေနာ္ … .
ဒါ့ အျပင္ နိုင္ငံ အတြက္ ရဲရဲ ဝင့္ဝင့္ မေမာ မပန္း နိုင္ေအာင္ လမ္းေပၚ ထြက္ ကာ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ေတြျပဳလုပ္ ေနတဲ့ ျပည္သူ ေတြကို အႏုပညာရွင္ အမ်ား အျပားကလည္း ဝိုင္းဝန္း ကာ တတ္နိုင္ သေလာက္ အစား အေသာက္ေတြ ေပးေဝ လႉဒါန္းခဲ့တာကို လည္း ၾကည္ႏူး စရာေတြ႕ျမင္ရ ပါတယ္ … .
အခု လည္း ေအာင္ေလး ဟာ သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔ အတူ ေပါင္း ၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္ ေတြ အတြက္ လမ္းမေပၚ ထြက္ဆႏၵၿပ ေနတဲ့ျပည္သူေတြ အစားအေသာက္ အဆင္ ေၿပ ေစရန္ ခ်စ္တီးထမင္းနဲ႔ အေအးမ်ား ကို ကိုယ္တိုင္ လိုက္ေဝငွေပးခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္ ။ အစစ အရာရာ စည္းလုံးၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္း လြန္းေနတဲ့ ပုံေလး ေတြကို ပရိသတ္ ႀကီးလည္း ၾကည့္ရႈနိုင္ ေစရန္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post အိမ်မှာနေရင်း သနပ်ခါး Campaignမှာပါဝင်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေတဲ့ လူထုကြီးကို အန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ မမသင်ဇာ
Next post အမိုက်စား အမူအယာလေးနဲ့ ပုရိသတို့အကြိုက် ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး